Lioka 22 - Ny Baiboly
Lioka toko 22
Ny faneken'i Jodasy hamadika ny Tompo - Ny namoronan'i Jesoa ny Eokaristia - Jesoa tao Getsemany - Jesoa tao amin'i Kaïfa - Ny nandavan'i Piera azy.
1Efa mby akaiky ny fetin'ny Azima atao hoe Paka, 2ary ny lohandohan'ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna dia nikaroka izay hevitra hamonoana an'i Jesoa, fa natahotra ny vahoaka izy ireo. 3Nidiran'i Satana kosa Jodasy, ilay atao hoe Iskariota, anisan'ny roa ambin'ny folo lahy, 4ka lasa izy nankany amin'ny lohandohan'ny mpisorona sy ny manam-pahefana niraharaha ny amin'izay hanolorany azy amin'izy ireo. 5Dia faly izy ireo ka nanaiky hanome vola azy. 6Ary nanaiky izy ka nikendry izay fotoana tsy hisy olona hanolorany azy.
7Dia tonga ny andron'ny Azima izay tsy maintsy hamonoana ny zanak'ondrin'ny Paka, 8ka naniraka an'i Piera sy Joany Jesoa nanao hoe: Mandehana manamboatra ny Paka hohanintsika. 9Aiza no tianao hanamboaranay azy? hoy ireo. 10Dia hoy izy taminy: Indro, rahefa miditra ao an-tanàna hianareo, dia hifanena amin'ny lehilahy ananakiray mitondra siny feno rano, ka manaraha azy any amin'izay trano hidirany, 11dia lazao amin'ny tompon-trano hoe: Izao no asain'ny Mpampianatra lazaina aminao: Aiza ny efi-trano hihinanako ny Paka miaraka amin'ny mpianatro? 12Dia hotoroany efi-trano malalaka àry fanaka hianareo, ka ao no amboary izay ilaina. 13Dia nandeha izy ireo ka nahita araka izay nolazainy taminy, ary nanamboatra ny Paka. 14Nony tonga ny fotoana, dia nipetraka hihinana izy sy ny Apostoly roa ambin'ny folo lahy.
15Ary hoy izy tamin'izy ireo: Naniry dia naniry hiara-mihinana ity Paka ity aminareo aho alohan'ny hijaliako, 16fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana azy intsony aho mandra-pahatanterany any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. 17Dia nandray kalisy izy ka nisaotra, ary nanao hoe: Raiso ity, ka zarao aminareo; 18fa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pahatongan'ny fanjakan'Andriamanitra. 19Rahefa izany, dia nandray mofo izy, ka nony efa nisaotra dia namaky azy, sy nanome azy ireo nanao hoe: Ity no vatako, izay atolotra ho anareo; manaova izany ho fahatsiarovana ahy. 20Dia nataony toy izany koa ny kalisy rahefa avy nihinana, ka hoy izy: Ity kalisy ity no fanekena vaovao amin'ny rako, izay alatsaka ho anareo. 21Kanefa indro ny tànan'izay mamadika ahy efa mby eto amiko eto ambony latabatra. 22Raha ny Zanak'olona, dia mandeha araka ny lahatra; fa loza ho an'izay lehilahy hamadika azy. 23Dia nifanontany ny mpianatra hoe iza re no dia hahavita izany amin'izy ireo.
24Ary velona koa ny ady hevitra tamin'izy ireo, momba ny hahalalany izay lehibe indrindra amin'izy ireo, 25ka hoy Jesoa taminy: Amin'ny jentily ny mpanjaka no mizaka azy rehetra, ary izay mandidy azy no atao hoe mpanao soa; 26fa aminareo kosa tsy mba toy izany, fa aoka izay lehibe aminareo no ho toy ny zandry, ary izay mandidy no ho toy ny mpanompo. 27Fa iza moa no lehibebe kokoa, ny mihinana amin'ny latabatra va sa ny manompo? Moa tsy ny mihinana amin'ny latabatra va? Ary izaho anefa eto aminareo dia toy ny mpanompo. 28Hianareo moa, naharitra nanaraka ahy tamin'izay nanjo ahy, 29izaho kosa hanamboatra fanjakana ho anareo, tahaka ny nanamboaran'ny Raiko fanjakana ho ahy, 30mba hihinananareo sy hisotroanareo eo amin'ny latabatro any amin'ny fanjakako, ary hipetrahanareo amin'ny seza fiandrianana hitsara ny foko roa amin'ny folo amin'Israely.
31Ary hoy ny Tompo: Ry Simona, ry Simona, indro Satana nitady hikororoka anareo tahaka ny vary, 32fa izaho nangataka ho anao, mba tsy ho lavo ny finoanao, ary rahefa mibebaka hianao dia hamafiso ny rahalahinao. 33Ary hoy Piera taminy: Vonon-kanaraka anao aho, Tompoko, na ho ao an-tranomaizina, na ho any amin'ny fahafatesana aza. 34Fa hoy Jesoa: Lazaiko aminao, ry Piera, fa mbola tsy haneno ny akoho anio, dia handà intelo ho tsy mahalala ahy hianao.
35Ary hoy koa izy tamin'ny mpianany: Raha naniraka anareo tsy nitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kiraro aho, moa orin-javatra va hianareo? 36Tsy orin'inona n'inona izahay, hoy izy ireo. Dia hoy izy taminy: Fa amin'izao kosa izay manan-pitapom-bola aoka hitondra azy; toy izany koa izay manan-kitapom-batsy, ary izay tsy manan-tsabatra aoka hivarotra ny akanjony ka hividy iray: 37fa lazaiko aminareo fa ity teny voasoratra ity koa tsy maintsy ho tanteraka amiko, dia ilay hoe: Natao lasitra iray amin'ny ratsy fanahy izy; fa efa ho tapitra daholo ny amiko. 38Dia hoy izy ireo: Tompoko, indreto misy sabatra roa. Dia hoy Jesoa taminy: Ampy izay.
39Dia nivoaka nankany an-tendrombohitra Oliva araka ny fanaony izy, ka nanaraka azy koa ny mpianany. 40Nony tonga tany izy dia nanao tamin'izy ireo hoe: Mivavaha mba tsy ho azon'ny fakam-panahy hianareo. 41Dia nihataka tamin'izy ireo tokony ho tra-toraka izy ka nandohalika, dia nivavaka, 42nanao hoe: Raiko! raha sitrakao, halaviro ahy ity kapoaka ity; ny sitra-ponao anefa no aoka ho tanteraka, fa tsy ny ahy. 43Tamin'izay dia nisy anjely anankiray avy tany an-danitra niseho taminy sy nankahery azy. Dia voan'ny fiadiana aina izy, fa vao mainka nivavaka mafimafy kokoa. 44Ary nanjary toy ny rà ny hatsembohany sady nipotrapotraka tamin'ny tany. 45Nony nitsangana avy nivavaka izy, dia nankeo amin'ny mpianany ka nahita azy matory noho ny alahelo, 46ary nilaza taminy hoe: Nahoana no matory hianareo? Mifohaza, ka mivavaha mba tsy ho azon'ny fakam-panahy hianareo.
47Raha mbola niteny izy, dia indro nisy andian'olona maromaro nitranga, ka ilay atao hoe Jodasy, anankiray tamin'ny roa ambin'ny folo lahy, no loha làlana, ary nanatona an'i Jesoa ilay io mba hanoroka azy. 48Ary hoy Jesoa taminy: Ry Jodasy, dia fanorohana lahy no amadihanao ny Zanak'olona? 49Nony hitan-dry zareo teo amin'i Jesoa izay hanjò, dia hoy izy taminy: Tompoko, mba hamely amin'ny sabatra va izahay? 50Dia nasian'ny anankiray taminy tokoa ny mpanompon'ny lehiben'ny mpisorona, ka afaka terý ny sofiny an-kavanana. 51Fa hoy Jesoa: Aoka izay. Dia nanendry ny sofin-dralehilahy izy, ka nahasitrana azy. 52Ary hoy Jesoa tamin'ny lohandohan'ny mpisorona sy ny mpandraharaha amin'ny tempoly ary ny loholona izay tonga teo handray azy: Mova tsy ny hisambotra jiolahy izato fihavinareo, mitondra sabatra sy langilangy! 53Teo aminareo isan'andro tao an-tempoly aho, nefa tsy nikasi-tànana ahy akory hianareo; fa izao tonga ny fotoanareo sy ny herin'ny maizina.
54Dia nisambotra azy izy ireo ka nitondra azy tany an-tranon'ny lehiben'ny mpisorona. Piera izany nanaraka teny lavidavitra eny ihany. 55Ary nampirehitra afo teo afovoan'ny tokotany ny olona, dia nipetraka nanodidina, ka mba niara-nipetraka taminy teo koa Piera. 56Nisy ankizivavy anankiray kosa nahita azy nipetraka tao akaikin'ny afo, ka nijery azy, dia nanao hoe: Ity koa niaraka taminy. 57Fa nandà Piera nanao hoe: Ravehivavy, tsy mahalala azy akory aho. 58Nony afaka kelikely dia nisy lehilahy anankiray koa nahita azy ka nanao hoe: Hianao koa lahy naman'irony olona irony. Fa hoy Piera: Ry sakaiza, tsy nàmany akory aho. 59Ora iray taorian'izany, dia nisy hafa nilaza tamim-pitokiana hoe: Tena marina raha tsy nàmany koa ralehilahy ity, satria Galileana izy. 60Dia hoy Piera: Ry sakaiza, tsy fantatro izay lazainao. Niaraka tamin'izay raha mbola niteny izy, dia naneno ny akoho. 61Ary nitodika nijery an'i Piera ny Tompo, ka tsaroan'i Piera ilay tenin'ny Tompo nanao hoe: Alohan'ny maneno akoho anio, dia handà ahy intelo hianao; 62dia nivoaka tany ivelany izy ka nitomany fatratra.
63Dia nataon'ireo olona nitana azy fihomehezana Jesoa sady nokapohiny, 64notampenany ny masony, notehafiny ny tavany, dia hoy izy taminy: Vinanio hoe izay namely anao? 65Ary maro ny teny ratsy hafa nanaratsiany azy. 66Nony vao maraina ny andro, dia nivory ny loholona sy ny lohandohan'ny mpisorona ary ny mpanora-dalàna, ka nentiny tao amin'ny Sanedrina Jesoa, ary hoy izy taminy: Raha hianao no Kristy, dia lazao aminay. 67Fa hoy izy taminy: Na hilaza aminareo aza aho, tsy hinoanareo akory; 68ary raha hanontany anareo aza aho, tsy hovalianareo na halefanareo akory. 69Fa hatramin'izao ny Zanak'olona dia hipetraka eo an-kavanan'ny herin'Andriamanitra. 70Dia hoy izy rehetra: Zanak'Andriamanitra izany hianao? Ary hoy izy taminy: Voalazanareo, izy aho. 71Ka hoy izy ireo: Inona indray no ilantsika vavolombelona? Tenantsika no nandre tamin'ny vavany. >